Naa, ojiji nke color na-amụba kwa ụbọchị. Tinyere ewu ewu na nke ekwentị mkpanaaka; ojiji nke ụdaolu bụkwa Ubara nke na-tumadi etinyere mata listi ọkpọ oku site n'ịnụ ụdaolu na-eme ka ojiji nke ekwentị na fun. Tupu ụdaolu e eji arụnyere site mobile n'ichepụta ụlọ ọrụ, ma n'oge dị iche iche software si na-eji ike ọhụrụ na ahaziri ụdaolu. N'ihi ya, ringtone egbutusị nwere ọrụ dị mkpa na-eke ụdaolu. Na ojiji nke a ringtone cutter, dị iche iche-awụ ọsọ n'ugwu na ọdịyo faịlụ nwere ike ga-egbutu sonyeere ọnụ. E nwere dị iche desktọọpụ software dị maka eke na ịcha ụdaolu, gụnyere, online ringtone egbutusị na Android na iOS ringtone cutter ngwa.
Part 1: Top Desktọpụ Ringtone egbutusị
Part 2: Top Online Ringtone egbutusị
Nkebi nke 3: Top Android Ringtone egbutusị
Nkebi nke 4: Ringtone cutter ngwa ọdịnala n'ihi iOS
1. AVCWare Ringtone Onye kere
Ọ bụ a ringtone eke software mepụtara ACWare Studio. Nke a software n'ọtụtụ ebe na maka eke ụdaolu maka mobile igwe na ngwaọrụ ndị ọzọ. Ọ na-enyere na-eke ahaziri ụdaolu nke di na iche iche formats. Ọ na-enyere ịgbakwunye ichabo na mmetụta na-agwụ si utịp ke ringtone. Iji a software na mp3 faịlụ na ụdaolu nwere ike ga-egbutu n'ime nta mp3 faịlụ.
Na-akwado fọrọ nke nta niile formats
Oge ụfọdụ mgbe freezes a bit
2. Free Ringtone Onye kere
Free Ringtone Onye kere bụ ezigbo software maka eke ụdaolu, igbutu na ụdaolu n'ime nta akụkụ na-agbakwụnye mmetụta ka ụdaolu. The ọdịyo faịlụ nwere ike ga-egbutu n'ime nta akụkụ site na iji mkpụbelata ọrụ nke dị n'ime software. Mmalite oge na ọgwụgwụ oge nke akụkụ nke anyị mkpa na a ga-ahọrọ na itinye mkpụbelata nhọrọ ga-egbutu ya ndị chọrọ ringtone. Ọ bụ freeware software dị ka dịnụ ọrụ na-adịchaghị.
Ọ bụ a freeware. Mfe ọrụ interface
Dị iche iche mmetụta nwere ike etinyere
E Nwere ọrụ na-adịchaghị.
Av Ringtone Max na-mepụtara AVSoft nke na-enyere ike pụrụ iche ụdaolu maka mobile. Nke a software na-eji trimming ọdịyo akụkụ. Nke a software nwere atụmatụ wepụ audio si video na mgbe e mesịrị ya nwere ike idezi dị iche iche na mmetụta. Ọbụna anyị ike idekọ olu anyị na mix ya elu dị iche iche na mmetụta. Anyị nwere ike izipu ikpeazụ ringtone ozugbo na ihe ọ bụla mobile ngwaọrụ site na iji Bluetooth nyefe.
Ọ na-ekwe onye ọrụ na-wepụ audio si video.
Mmepụta àgwà dị elu
Ọ dịghị ihe kpọmkwem.
Nke a na desktọọpụ software bụghị dị ukwuu dị ka ndị gara aga software si na-eke ụdaolu ebe ọ na-ike n'ụzọ dị irè na-eji maka ịcha ụdaolu. Nke a software adịghị nwere ikike wepụ audio si video faịlụ na otú ha na-ejedebeghị na atụmatụ. Ha na-agaghị àjà ukwuu ka ahịa. The mp3 faịlụ nke ibu size-apụghị kwajuru na ngwa a. Ọtụtụ n'ime oge, a na ngwa freezes. Ọ bụ dakọtara na ọtụtụ igwe na sistem.
Ọ dị mfe iji nnọọ mfe iji
Ọ na-arụ ọrụ a dịgasị iche iche nke mobile igwe.
Cropping ngwaọrụ adịghị nnọọ kpọmkwem.
5. AVGO Free Ringtone Onye kere
Ọ bụ free software nke na-enyere bee ụdaolu si nta ọ bụla ọdịyo na video usoro. Ọ nwere mfe iji interface na ọbụna ihe na-enweghị uche na mmadụ nwere ike iji nke a software mfe. Ndị kasị mkpa atụmatụ a software bụ na ọ na-akwado eke ogbe nke ichabo na mmetụta na-agwụ si mmetụta. Ọ na-ekwe ka anyị na-họrọ a òkè si clip na ewepụtụ ya site na isi faịlụ na-azọpụta ya dị ka iche iche ringtone faịlụ. Nkwekorita media formats dị ka Mp3, AMR, MP4, mp3 na-akwado site na nke a software.
Na-enyere aka na-eke ogbe nke mmetụta.
Ịjụ oyi na na-agwụ si mmetụta pụrụ etinyere ya.
Mgbe ụfọdụ usoro ihe omume mkpọka.
6. Boilsoft ringtone onye
Nke a software na ọtụtụ-eji na-eke ụdaolu ma na-arụ ụdaolu metụtara ọrụ. Ọ nwere dị iche iche iche ike. Ọ a pụrụ iche mma ie bee dị iche iche agba si a video na ọdịyo na-agwakọta ndị a na-etolite a ringtone. Customization nke sample ọnụego, bit udu na ọwa nke e kere eke nke ụdaolu bụ akụkụ pụrụ iche nke a software. Anyị nwere ike idekọ anyị onwe anyị olu tinye ya tinyere iche iche ndị ọzọ olu ike a pụrụ iche ringtone. The faịlụ nwere ike mfe egbutu n'ime nta agba.
Ọ na-enye ohere customization nke sample ọnụego, aru ọnụego.
The size nke mmepụta faịlụ a ga-elu.
Nke a software bụghị naanị maka na-eke na ịcha ụdaolu ma ọ na-tumadi ji maka na ntughari nke ọdịyo na video faịlụ. Nke a software nwere nnukwu ego nke atụmatụ na nke a nwere ike n'ụzọ dị irè na-eji n'ihi igbutu na ụdaolu. Ihe dị anyị mkpa bụ na-emeghe ụdaolu na format ụlọ ọrụ ma na mgbe na elu taabụ; mmalite òkè na ọgwụgwụ òkè mkpa ka a họrọ n'ihi na ọnwụ. Mgbe na-ahọpụta anyị nwere ike họrọ Malite nke ga-amalite usoro. Anyị pụrụ ọbụna egbutu ringtone na vidiyo.
Fọrọ nke nta niile ụdị audio formats na-akwado.
Ọ dị mfe ịrụ media akakabarede.
Easy Audio cutter bụ ihe dị mfe ngwá ọrụ iji egbutu a kpọmkwem òkè si ọdịyo faịlụ dị ka anyị chọrọ. Nke a bụ free ngwá ọrụ na ọ na-adịghị akwado ọdịyo faịlụ nke elu bitrates. Ihe karịrị nke ahụ video faịlụ na-anaghị akwado na a software. Ọ na-eji maka ìhè ojiji nzube dị ka nlele, ịcha mp3 faịlụ na bit ọnụego mmetụta.
Mp3 faịlụ nwere ike mfe jikọtara ejikọta.
Video faịlụ na-anaghị akwado
Exmplayer pro bụ ihe award emeri Multimedia software nke a na-tumadi ji dị ka a music ọkpụkpọ na dị ka ihe mp3 cutter. Ma nke a software na-nyeere na a atụmatụ bee mp3 files.Mp3 cutter na kwukwara na ndị ọzọ software atụmatụ. Ya mere, mgbe a song ma ọ bụ video na-egwuri na anyị nwere ike ịtọ ala mmalite ebe site na-ege ntị faịlụ na na otu ụzọ anyị Mkpọ debere ala ọgwụgwụ isi na site na iji mp3 cutter ngwá ọrụ nke dị na ya anyị nwere ike igbutu akụkụ n'etiti mmalite isi na ọgwụgwụ ebe. Ọ na-adịghị awade ọzọ atụmatụ ebe mp3 faịlụ nwere ike egbutu. Bụrụ na nke video faịlụ anyị ike wepụ audio si video faịlụ site na iji audio extractor na anyị nwere ike iji ndị ọdịyo faịlụ maka inwekwu eme. Nke a ọkpụkpọ na-akwado 3D video playback. Audio convertor akwado ihe karịrị 5 formats.
Ọ na tumadi eji dị ka a media ọkpụkpọ.
Ringtone cutter dị mfe iji.
Ọ ga-ewe a nnukwu ego nke ebe nchekwa ohere
10. IKE Audio cutter
Ọ bụ ihe dị mfe software omume nke a na-eji egbutu ọdịyo egwu n'ime obere agba. Ha adịghị enye ukwuu atụmatụ. Ọ bụ a freeware omume na ọ bụ n'efu iji. Naanị otu version nke usoro ihe omume dị na ya adịghị nwere pro version. Usoro ihe omume interface bụ ọtụtụ dị mfe ma na ọ na-adịghị ihe ọ bụla mgbagwoju ngwaọrụ. Ringtones nwere ike ga-egbutu site na-ahọpụta mmalite isi na ọgwụgwụ isi na-ahọpụta ndị mmalite akakabarede nhọrọ.
Ringtone nwere ike mfe egbutu.
The interface bụ ọtụtụ dị mfe.
Naanị nkiti ọrụ nwere ike ime.
Audiko.net bụ a online ngwá ọrụ n'ihi na ọnwụ na-eke ụdaolu. Nke a bụ n'elu ọtụtụ website maka eke ụdaolu na ịcha faịlụ n'ime obere agba. Nke a website na-akpan mere maka ụdaolu na yiri ngwa. Iji egbutu ụdaolu, Firstly anyị mkpa bulite ọdịyo faịlụ na-segmented. Faịlụ nwere ike uploaded site abụọ ụzọ. Akpa usoro bụ site na-ebugote audio anyị ike mbanye na abụọ usoro na-enye ohere abanye Url nke faịlụ nke dị mkpa. Nzọụkwụ nke abụọ bụ segmentation .Mgbe ebugote nke faịlụ, anyị pụrụ iji segmentation ie Anyị nwere ike họrọ òkè nke ọdịyo faịlụ nke bụ ga-egbutu na-eme ka ringtone. Anyị ga-enwe ike ịzọpụta segmented òkè anyị na PC. Nke a na saịtị awade a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ringtone downloads.
Ọ e mere maka ringtone metụtara ngwa.
Files nwere ike mfe uploaded
Awade ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ringtone download
The website were ụfọdụ oge Ibu Ibu
Saịtị a nwere ụfọdụ ndị ọzọ elu atụmatụ tụnyere ndị ọzọ online ringtone Ndinam weebụsaịtị. Ọ bụ a free akakabarede online ngwá ọrụ website. The isi mma awa site a software bụ audio akakabarede. Ọ nwere wuru na audio Ntụgharị nke ike-eji maka converting ọdịyo faịlụ ka ọ bụla usoro tinyere ringtone onye. Site na iji nke a online ngwá ọrụ anyị nwere ike egbutu kpọmkwem òkè si a ọdịyo faịlụ na mgbe e mesịrị ọ ga-eji na-eke ụdaolu. Nke a na saịtị awade atụmatụ ike ringtone site na iji elu mmetụta. Anyị kwesịrị bulite faịlụ site na kọmputa na anyị nwere nhọrọ igbutu kpọmkwem akụkụ si audio faịlụ. Anyị nwere ịbanye anyị Email id mere na ikpeazụ faịlụ ga-eziga ala anyị email adreesị.
Ọ bụ a free akakabarede ngwá ọrụ
Audio faịlụ nwere ike converted ụdị ọ bụla nke formats
Ọ dịghị ihe kpọmkwem
Ọ bụ a elu online ngwá ọrụ nke na-eji na-eke ụdaolu. Saịtị a nwere a set nke ọma na-akpali atụmatụ nke ga-eke ụdaolu ka a ọhụrụ larịị. Ọ bụ nnọọ obere ịhụ weebụsaịtị dị ka nke a nke na-enye ndị ọzọ elu atụmatụ eke ụdaolu. Ọ na-enye 3 ụdịdị maka eke ụdaolu. N'oge usoro nke na-eke ụdaolu, anyị nwere ike igbutu faịlụ ka agba dabeere na ọchịchọ anyị. The dị iche iche ụdịdị dị bụ Easy mode, elu mode na ọkachamara mode. All atọ ụdịdị nwere ike iji na-egbutu ụdaolu ka n'ihu obere agba.
Ringtone nwere ike mfe kere.
Dị iche iche ụdịdị dị
Ahụmahụ a chọrọ iji na-arụ ọrụ ya
Nke a website ngwá ọrụ nwere ọtụtụ otu atụmatụ dị ka nke website makemyringtone.org. Nke a na saịtị awade atọ ụdịdị maka eke ụdaolu. Na mfe mode, nanị ihe ndị bụ isi atụmatụ ndị dị ka nhọrọ nke mmalite na ọgwụgwụ mgbe iji gbutuo ringtone na obere ego nke mmetụta ndị dị ka tinye ya na ringtone. Nke a mode bụ ezuru ịcha ụdaolu. Nke abụọ mode bụ elu mode nke nwere ihe mmetụta tinyere ringtone ọnwụ nhọrọ. Ịjụ oyi na na-agwụ si nhọrọ dị maka na-agbakwụnye na faịlụ. Ọ bụ ike online ngwá ọrụ maka ringtone e kere eke.
Ọ bụ ngwá ọrụ dị ike
Ọzọ atụmatụ bụ adịghị.
A online ringtone e kere eke website nke enweghị ọtụtụ atụmatụ. Ọ bụ na saịtị nke dị mfe ọrụ interface na bụghị ọtụtụ atụmatụ ndị dị. Nke a online ngwá ọrụ bụ isi na-eji na-eke ụdaolu site n'ịtụgharị otu usoro nke ọdịyo ọzọ ebe na usoro nke converting anyị nwere ike igbutu faịlụ n'ime nta agba. Nhọrọ nke mmalite isi na ọgwụgwụ mgbe dị na ya na ọ ga-eji bee faịlụ n'ime nta ụdaolu. Ha adịghị achụ ụdị ọ bụla nke mmetụta ka tinye aka ringtone. Faịlụ ga-egbutu a chọrọ iji bugoo na website site na iji bulite faịlụ nhọrọ nke dị na website.
Nhọrọ nke mmalite isi na ọgwụgwụ mgbe dị mfe
Ha adịghị achụ ụdị ọ bụla nke mmetụta ka tinye aka ringtone
Cutmp3.net na-eji igbutu ọdịyo faịlụ nke dị iche iche formats ka obere akụkụ. The website bụ otú ahụ dị mfe tinye na ya nwere naanị ụfọdụ isi ọrụ na-eme ma ọ dịghị ihe karịrị nke ahụ. Site na iji saịtị a, usoro nke igbutu achọrọ akụkụ nke ọdịyo faịlụ bụ mfe otú ahụ. Ọ mejupụtara atọ nzọụkwụ. Na nzọụkwụ mbụ, anyị kwesịrị iji họrọ ringtone nke anyị mkpa ga-egbutu. Na nzọụkwụ nke abụọ anyị mkpa iji họrọ akụkụ ke ringtone nke dị mkpa ga-egbutu. Nzọụkwụ nke atọ na-agụnye nzọpụta nke ịkpụ akụkụ ọ bụla mbanye ma ọ bụ ndị ọzọ mobile ọnọdụ. Na nkenke okwu, a website nwere ike kọwara dị a online ngwá ọrụ na-eji egbutu ụdaolu ka obere akụkụ.
New ọrụ ike iji ya.
Ọ nwere nanị ụfọdụ nkiti ọrụ na-eme ma ọ dịghị ihe karịrị nke ahụ.
Otu n'ime elu online ringtone Ndinam ngwá ọrụ nke nwere ihe atụmatụ tụnyere ndị ọzọ weebụsaịtị. Nke a na saịtị awade free ụdaolu download kwa. A online nkuzi bụ dị na website nke aka na-eke ụdaolu site na iji website. Ọ bụ onye na-elekọta mobile ringtone obodo ma na-enyere na-eke ringtone. The ụdaolu nwere ike ga-egbutu ka obere; agba site nke a mma. Ọ bụ ọgaranya mmetụta. A ọnụ ọgụgụ buru ibu nke atụmatụ ndị dị na website. Ihe karịrị 100 mmetụta dị maka eke ụdaolu. Anyị kwesịrị pịa na ego na nhọrọ iji họrọ mmalite isi na lelee nhọrọ na họrọ ọgwụgwụ nhọrọ.
Ọ na-enye ringtone downloads.
Ọ bụ ọgaranya mmetụta
Mmepụta faịlụ a ga-nke nnukwu size.
Site na iji nke a online website anyị nwere ike egbutu ọ bụla ọdịyo faịlụ n'ime ụdaolu. Site n'itinye mfe nzọụkwụ anyị nwere ike igbutu ụdaolu. Nke a na saịtị nwekwara nwere nnukwu nchekwa data maka free ụdaolu. Ngwa nke a na ike na website akwado fọrọ nke nta niile ụdị ọdịyo faịlụ na ọ bụrụ na anyị na-emeghe a faịlụ ahụ ọdịyo faịlụ nwere ike ebipụ ala obere akụkụ na ojiji nke ngwa arụnyere na webpage. Na ikpe nke a video faịlụ, mgbe anyị bulite a video faịlụ, mgbe ahụ audio faịlụ nwere ike amịpụtara si webpage na ya nwere ike mgbe e mesịrị bee ala site n'elu usoro.
Saịtị nwere nnukwu nchekwa data maka free ụdaolu.
Ngwa nke a na ike na website akwado fọrọ nke nta niile ụdị ọdịyo faịlụ
Ọ bụ a mgbagwoju usoro.
Mgbasa ozi na-ekpuchi ọtụtụ akụkụ nke website.
Nke a website bụ naanị mere maka ịcha ọdịyo faịlụ .Ọ dị nnọọ mfe ma ọkaibe website ngwá ọrụ nke nwere atọ nzọụkwụ nke usoro. The nzọụkwụ ndị mbụ nwere ebugote nke ọdịyo faịlụ ka website site n'ịhọrọ audio nhọrọ. The abụọ nhọrọ bụ ịkpụ usoro. Mgbe na-ebugote ọdịyo faịlụ, ọ ga-ajụ anyị na-ahọrọ ebe na-amalite na n'ókè-akwụsị. Mgbe na-ahọpụta ma họrọ ịkpụ nhọrọ dị ka ahọrọ akụkụ ga-egbutu ọhụrụ faịlụ na nke atọ usoro-agụnye nzọpụta nke ịkpụ faịlụ. Anyị nwere ịzọpụta ịkpụ ala faịlụ ka anyị mbanye.
Audio nwere ike amịpụtara si video faịlụ.
Na-achọ ihe ọmụma ụfọdụ na-arụ ọrụ na ya
Ọ bụ a bara uru online ngwá ọrụ iji egbutu faịlụ na-eme ka anyị onwe anyị ụdaolu na enyemaka nke dị iche iche mmetụta. Na ojiji nke ndị a online ngwaọrụ, desktọọpụ software si nwere ike izere dị ka ndị a online ngwaọrụ enye atụmatụ nke ndị fọrọ nke nta ahụ dị ka desktọọpụ software. Desktọọpụ software dị nnọọ mgbagwoju tụnyere a online ngwaọrụ. Usoro na a online ngwá ọrụ bụ otu ihe ahụ dị ka nke ndị ọzọ ngwaọrụ anyị mkpa bulite ọdịyo faịlụ ma ọ bụ ringtone nke bụ ga-egbutu mgbe na-ebugote faịlụ, ọ ga-ịjụ anyị ka anyị nke na-arụ ọrụ anyị nwere ịrụ. Ọrụ dịgasị iche iche dị na saịtị na-mp3 cutter, media joiner, Ringtone e kere eke. Si na ya anyị nwere iji họrọ mp3 cutter na mgbe ọ ga-ajụ anyị iji họrọ mmalite isi na ọgwụgwụ ebe. Site na-ahọpụta mmalite isi na ọgwụgwụ isi na ịpị ịkpụ nhọrọ, anyị ga-enwe ike egbutu achọrọ akụkụ.
Ọ dị mfe iji.
Ngwaọrụ dị na-ejedebeghị
Nza nke mgbasa ozi
21. Media Ntụgharị
Nke a bụ otu n'ime n'elu android ngwa nke na-eji n'ihi igbutu ọdịyo faịlụ na video faịlụ ka nta agba. Ọbụna ọtụtụ ndị video Downloader dị ka Tubemate na ndị ọzọ ga na-ajụ anyị ibudata Media Ntụgharị ngwa iji tọghata na bee ala nke ọdịyo faịlụ. Onye ọrụ interface nke a na ngwa dị nnọọ mfe. A na ngwa na-akwado fọrọ nke nta niile ụdị ọdịyo na video formats na android ekwentị. Video ka audio akakabarede bụ na o kwere omume site na iji ngwa a. Mgbe a ga-họrọ chọrọ faịlụ ga-egbutu, ọ ga-ajụ ala mmepụta àgwà na sample ọnụego nke faịlụ na na otu window anyị ga-enwe ike iji họrọ mmalite na ọgwụgwụ isi na họrọ OK nhọrọ nke ga-amalite usoro
Ringtone nwere ike ga-egbutu nnọọ mfe.
Ọtụtụ n'ime ndị audio formats na-akwado
The ngwa na-ewe ọtụtụ ebe nchekwa
Nke a bụ android ngwa version nke ama online ringtone onye Audiko. Nke a bụ ngwa version nke online ngwá ọrụ. Nke a ngwa nwere ụfọdụ ndị ọzọ elu atụmatụ tụnyere nke ndị online ngwá ọrụ. A na ngwa na-enyere anyị ike omenala ụdaolu site na-agbakwụnye dị iche iche mmetụta na atụmatụ. Ọ na-enyere anyị aka bechapụ a nkenke òkè dum audio nke dị anyị mkpa. A na ngwa na-enyere anyị ibudata ụdaolu si a nnọọ nnukwu nchekwa data. Ringtones nwere ike anya dị ka Genres. A na ngwa bụ oké ịba uru maka android ntị n'ihi na-eke ụdaolu na bee ala nke ọdịyo faịlụ.
Na-enyere aka mepụtara omenala ụdaolu.
Nwere nnukwu nchekwa data nke ringtone downloads.
Android 4.2 na elu a chọrọ.
A na ngwa bụ oghe isi ringtone nchịkọta akụkọ nke android igwe. A na ngwa e ebudatara site ọtụtụ nde ebe ya igba egbe. Ọ na-enyere ndị ọrụ ike ahaziri ụdaolu, ngosi aj u na Mkpu. Ọ nwere ringtone nchịkọta akụkọ nke na-enyere ndị ọrụ na-egbutu a kpọmkwem akụkụ si dum faịlụ. Nke a bụ ezi ngwa n'ihi na-eke ringtone. Na o nwere ihe dị ka atụmatụ tụnyere nke ndị ọzọ ngwa. Ọ na-enyere ndị ọrụ na-tinye pụrụ iche utịp dị ka ichabo na -fade si na ndị ọzọ na mmetụta. Ọ jụrụ ikike ele ohere kọntaktị, iji setịpụrụ ringtone maka kọntaktị.
Ọ na-eji ike ahaziri-aj u, Mkpu.
Ringtones nwere ike mfe egbutu.
Naanị ụgwọ mbipute awade zuru atụmatụ
Nke a bụ a ga-enwe na ngwá ọrụ na-android ekwentị. Ọ bụ kpam kpam freeapp. Site na iji nke a ngwa anyị nwere ike ịmepụta anyị onwe anyị ụdaolu, mkpu, ma ọ bụ ngosi ụda site na iji ihe ẹdude ụda faịlụ na ekwentị mkpanaaka. Ọ na-enyere aka egbutu a kpọmkwem akụkụ si ọdịyo faịlụ. Ọ nwere akpọ ngwá ọrụ ịcha ngwá ọrụ nke ga-enyere ndị ọrụ igbutu kpọmkwem òkè si ringtone na converted ọ bụla formats dị ka: mp3, AAC, WAV, ufọt ufọt.
Ọ bụ a free ngwa
25. Kpaa na ụda
A na ngwa bụ ihu ọma a audio agwakọta ngwa ma ọ bụ nwere ọzọ atụmatụ nke ike-eji maka ringtone e kere eke. Ọ na-enyere ndị ọrụ na-ewepụtụ ma jikota abụọ ọdịyo faịlụ. Ringtones pụrụ n'ụzọ dị mfe mere site ngwa a. A na ngwa bụ ihu ọma mfe mgbe tụnyere ndị ọzọ ngwa tumadi ruru onye ọrụ interface nke a na ngwa nke bụ pụtara dị mfe. Mmepụta faịlụ nwere ike zọpụta dị ka chọrọ usoro. Onye ọrụ interface nke bụ mfe-enyere onye ọrụ bee-aj u na ole na ole clicks nakwa swipes na android ekwentị. The amalite na-agwụcha mgbe nwere ike ịtọ ala. Na nkenke okwu, Ọ bụ ezigbo android ngwa nke na-enyere ndị ọrụ na-egbutu ọdịyo faịlụ.
Audio Ịgwakọta nwere ike ime.
Aj u nwere ike ga-egbutu mfe na n'ụzọ dị irè.
26. Ringtone onye
Nke a bụ n'elu gosiri ngwa na IOS ngwa ahịa nke na-eji ọtụtụ nde mmadụ na-eke ahaziri ụdaolu, Ịma Ọkwa, Mkpu, ọnwụ nke ụdaolu. Ọ na-enyere ndị ọrụ ike ụdaolu si ipad songs. E kere eke nke ụdaolu na ọ bụghị nanị. The ngwa nwere a egbutu mma nke na-enyere ndị ọrụ igbutu kpọmkwem òkè o na ụdaolu ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ọdịyo faịlụ .Anyị iji họrọ mmalite na ọgwụgwụ òkè iji bee ya ala. Ichabo na a ichabo si atụmatụ nwere ike etinyere site na iji ngwa a. Ọ na-ekwe ndị ọrụ idekọ ọ bụla songs ma dezie na ewepụtụ ka a ahaziri ringtone
Ringtone nwere ike ahaziri mfe
Ịjụ oyi na-agwụ si mmetụta pụrụ mfe etinyere
Os iOS 4 na elu a chọrọ
27. Ringtone mmebe music
Ọ bụ ihe ọzọ na-eji ngwa dị na ios ngwa ahịa nke uche-enyere onye ọrụ ike na-akparaghị ókè omenala ụdaolu, Mkpu, na ederede-aj u na ojiji nke ẹdude songs na music n'ọbá akwụkwọ. A na ngwa na-enyere onye ọrụ egbutu a kpọmkwem akụkụ si ngụkọta audio faịlụ. Ọ nwere mara mma ọrụ interface iji kpatụ ringtone ogologo. Ọ bụ nnọọ ngwa ngwa na-adaba adaba ụzọ nke ịcha ụdaolu.
Kwado trimming atụmatụ
Ọ bụghị a free ngwa.
28. Mepụta Ringtones
Kasị nke ngwa na ios ụlọ ahịa na-adịghị free ma nke a na-eji ngwa bụ kpam kpam free iji. E mere ya n'ụzọ dị otú ahụ na ọbụna ihe na-enweghị uche onye ọrụ nwere ike na-arụ ọrụ ya. A na ngwa bụ tumadi Mmanu maka eke ụdaolu na-edezi nke ụdaolu. Usoro nke edezi nke ụdaolu na-agụnye trimming nke ụdaolu. Ọ pụtara na akụkụ ụfọdụ nke faịlụ nwere ike egbutu iji mee ka ọzọ ringtone. Kpaa atụmatụ ke ngwa nwere ike ga-eji maka igbute nke ọdịyo faịlụ. Anyị nwere ike ịtọ mmalite na ọgwụgwụ nke ringtone. Ọ bụ kpam kpam free na oké ụzọ ịmepụta ringtone.
Ọbụna na-enweghị uche onye ọrụ nwere ike na-arụ ọrụ ya.
Eji na-eke ụdaolu na-edezi nke ụdaolu.
Mgbe ụfọdụ, ọ ugboelu ala.
29. Ringtone Onye kere App
Ọ bụ a elu ndị ọzọ ngwa na-eji na-eke ụdaolu. A na ngwa nwere ihe dị ka atụmatụ tụnyere ndị ọzọ ngwa ọdịnala na ios ụlọ ahịa. Ọ nwere atụmatụ ịgbakwunye a ndekọ song na-eme ka omenala ụdaolu. Cutting nke ringtone bụkwa dị na ngwa a. Ọ na-enyere ike mmalite na ọgwụgwụ isi ihe ndị sitere a audio faịlụ na a kacha ogologo nke sekọnd 40. Nhọrọ nke oge dịgasị n'ụzọ ziri ezi si 0,02 sekọnd. Audio faịlụ nwere ike trimmed; achọrọ òkè nke a song na music n'ọbá akwụkwọ nke ios ngwaọrụ nwere ike-azọpụta.
Cutting nke ringtone bụkwa dị na ngwa a.
30. Custom Ringtone Onye kere Max
A na ngwa na-họọrọ 1 dị ka n'elu music ngwa na App Store na 5 mba. Nke a ngwa nwere a dị mfe ọrụ interface na ọ dịghị achọ ahụmahụ iji ngwa a. Ọ bụla nwere ike iji nke a ngwa ike ụdaolu. Ahaziri ụdaolu pụrụ n'ụzọ dị mfe-etinyere na kere. The ngwa atọghata a song ka Ringtone ke otu mgbata. Ọ na-adịghị nwere ọtụtụ atụmatụ dị ka ọ bụ a isi ringtone Ndinam ngwa. Ụfọdụ kpọmkwem ebe nwere ike gbutere ọdịyo faịlụ site na iji ịkpụ ngwá ọrụ na-eji ngwa. Anyị nwere ike ịmepụta a ọhụrụ na ahaziri ringtone iji ngwa a.
Akakabarede na mere a dị mfe mgbata
Ọ bụghị a free version.
Top 15 nrụọrụ ka Download Free Country Ringtones
Olee otú igwu egwu YouTube vidiyo na VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ
Olee otú weghara A nseta ihuenyo on PS4
Olee otú iji tọghata oziolu Audio faịlụ ka MP3
Wii Netflix: Olee ekiri Netflix on Wii
Freeware Video Downloader: Free Download YouTube Videos na a Click
Olee otú iji belata hà AVI (DivX, XviD) Video
> Resource> Video> Top 30 Ringtone egbutusị maka ihe ọ bụla Platform